कास्की २ मा विद्या भट्टराई दोब्बरले अघि
नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर १५, २०७६, ११:४८
पोखरा– प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ को मतगणना जारी छ। पछिल्लो मत परिणामअनुसार अहिले नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भट्टराई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलभन्दा दोब्बर भन्दा बढी मतले अघि छन्।
भट्टराईले ११ हजार ७ सय ३० मत प्राप्त गरेकी छिन् भने कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलले ५हजार ८ सय ९३ मत ल्याएका छन्।
वडा नम्बर ३३, २१, २० र १७ को मतगणना सकिएको छ।
कुन कुन देशका लागि सिफारिस भए राजदूत? यी हुन् मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा सिफारिस भएका छन्। उनी पनामा, कोस्टारिका, मेक... बिहीबार, असोज १५, २०७७
कांग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षको प्रश्न : पार्टीभित्रै लड्न परेको बेला सरकारविरुद्ध कसरी लड्ने? 'नेकपाको सरकार स्वेच्छाचारिता, कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भू... बिहीबार, असोज १५, २०७७
प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न- के समय सुहाउँदो चै भ्रष्टाचार हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्सन गरिएको ट्विटमा प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, 'डा केसीको अनसन समय सुहाउँदो भएन भन्ने सरकारले लोकत... बिहीबार, असोज १५, २०७७